(IV-၁၁၃၈/၁၉၉၃) (IV-၅၂၉၂/၂၀၀၁) (IV-၅၂၉၃/၂၀၀၁)
IMEX (Myanmar) Co., Ltd. သည် Myanmar Yellow Pages ဟူသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်အမှတ်အသားနှင့် (Walking Fingers) လမ်းလျှောက်လက်ချောင်းများပုံပါ အတိုင်း (Yellow Pages Logo) ၀န်ဆောင်မှုအမှတ်တံဆိပ် (Service Mark) ကို ရန်ကုန်မြို့ စာချုပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ရုံး၌ မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၄/၁၁၃၈/၁၉၉၃)တို့အရ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ စ၍ မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး စဉ်ဆက်မ ပြတ်သုံးစွဲလာရာမှ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၄/၅၂၉၂/၂၀၀၁)နှင့် (၄/၅၂၉၃/၂၀၀၁) ထပ်ဆင့်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး သတင်းစာမှတဆင့်လည်းကောင်း၊ ကြားခံမီဒီယာများဖြစ်သော ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ Internet, Website Mobile မှတဆင့် အခါအားလျော်စွာ ကြော်ငြာ၍လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ မူပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြောင်း အများ သိစေရန် အသိပေး ကြေငြာထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
IMEX (Myanmar) Co., Ltd. သည် အဆိုပါ ၀န်ဆောင်မှုအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော Myanmar Yellow Pages ကုန်အမှတ် တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားနှင့် Yellow Pages သင်္ကေတဖြစ်သော (Walking Fingers) Logo ကို အသုံးပြု၍ Myanmar Yellow Pages Directory ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ နှစ်စဉ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိလာခဲ့ရာ ယခု ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် (၂၂) ကြိမ်မြောက် (မြန်မာအ၀ါရောင်စီးပွားရေးလမ်းညွှန်)စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Myanmar Yellow Pages ဟူသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်အမှတ်အသားနှင့် လမ်းလျှောက်လက်ချောင်းများ (Walking Fingers Logo) အမှတ်တံဆိပ်အား အခြားမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ထပ်တူဖြစ်စေ၊ ဆင်တူယိုးမှား ဖြစ်စေ တုပသုံးစွဲခွင့် မရှိကြောင်း ပြည်တွင်းနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများ၌ ရှေ့နေမှတဆင့် သတိပေးကြေငြာချက်များကို အကြိမ်ကြိမ် ထည့်သွင်း ကြေငြာထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြော်ငြာရှင်များအနေဖြင့် မှားယွင်းဆုံးရှုံးမှုများ မဖြစ်စေရန်နှင့် ခွဲခြားသိရှိ နိုင်စေရန် IMEX (Myanmar) Co., Ltd. ၏ ၀န်ထမ်းများမှဖြန့်ဝေပေးသော Yellow Pages Logo (လမ်းလျှောက်လက်ချောင်းများ) အမှတ်တံဆိပ်ပါ Myanmar Yellow Pages (မြန်မာအ၀ါရောင်စီးပွားရေးလမ်းညွှန်) စာအုပ်၊ Online ပေါ်တွင် လွှင့်တင်ထား သော www.myanmaryellowpages.biz ၀ဘ်ဆိုဒ်၊ www.imexmyanmar.com ၀ဘ်ဆိုဒ်နှင့် Mobile App တွင်လည်း Myanmar Yellow Pages (IMEX (Myanmar) Co., Ltd.) တို့ပါရှိမှသာ Myanmar Yellow Pages (မြန်မာအ၀ါရောင် စီးပွားရေးလမ်းညွှန်) အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
IMEX (Myanmar) Co., Ltd, the Copyright and Registered Owner of the name “Myanmar Yellow Pages” and its correlative pictiorial Service Mark Logo of the “Walking Fingers” hereby issuesapublic notification concerning the above mentioned Trade Mark and Brand as shown below.
IMEX (Myanmar) Co., Ltd. has legally and officially registered “Myanmar Yellow Pages” and its pictiorial Service Mark logo of the “Walking Fingers” as herein mentioned above, under Myanmar Reg. No. (IV – 1138/1993), (IV-5292/2001) (IV-5293/2001). This Copyright Trademark and Brand in all its aspects were registered at the Office of the Deeds, Yangon, Myanmar in 1993, 2001 and Public Notice was subsequently disseminated by IMEX (Myanmar) Co., Ltd throught advertisements on several occasions in newspapers as well through the radio, television and internet media.
There are numbers of cases have been reported in where the Yellow Pages logo and service have been unlawfully used. IMEX (Myanmar) Co., Ltd. is the only Yellow Pages company which is officially registered and regonized by the government of Myanmar with the official “Walking Fingers” logo.